RASMI: Kooxda Juventus oo ku dhawaaqday saxiixa Adrien Rabiot – Gool FM
(Turin) 01 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa si rasmi ah u shaacisay inay Adrien Rabiot beeca xorta ah kaga soo qaateen Naadiga Paris Saint-Germain.
Inkastoo aysan bayaankeeda rasmiga ah kooxda Juve ku sheegin heshiiska qiimaha ay kula soo wareegtay Rabiot, haddana waxaa la fahamsan yahay inuu ogolaaday heshiis afar sanadood ah oo uu xilli ciyaareedkii ku qaadanayo adduun dhan 7 milyan oo euro oo lagu daray lacagaha gunnooyinka ah oo ay sii raacdo 10 milyan oo euro oo ah saxiixiisa beeca xorta ah.
Xiddiga reer France ee Adrien Rabiot ayaa la soo bandhigi doonaa isagoo ah saxiixii ugu dambeeyey ee kooxda Bianconeri berrito oo Talaado ah 10:00 barqannimo saacadda Talyaaniga.
24-sano jirkaan ayaa PSG ka tirsanaa tan iyo sanadkii 2013-kii, waxaana uu u ciyaaray kooxda reer France 227 kulan isagoo u dhaliyey 25 gool, una sameeyey 20 caawin, isla markaana la hantay lix jeer horyaalka Ligue 1.
Si kastaba ha ahaatee, muran qandaraaska quseeya ayuu kaga baxay safka kooxda koowaad ee PSG bishii December.
Laacibkan lugta bidix ku ciyaara ayaa qarka u fuulay inuu ku biiro Barcelona, laakiin heshiiskii ay kula wareegtay kooxda reer Spain ciyaaryahan Frenkie de Jong ayaa u ogolaaday Bianconeri inay gacanta ku soo dhigto.
Rabiot ayaa sidoo kale lix kulan u saftay xulkiisa Faransiiska, laakiin uma uusan u ciyaarin dalkiisa in ka badan sanad kaddib markii uu diiday inuu ka mid noqdo xiddigaha heeganka u ah xulkiisa Koobkii Adduunka ee 2018-kii ka dhacay Ruushka.
Waa ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee beeca xorta ah ugu soo biira kooxda Juventus kaddib markii ay heshiiskaas xorta ah ku soo qaateen xiddigo badan oo ay ku jiraan Andrea Pirlo, Paul Pogba, Dani Alves iyo xitaa Aaron Ramsey.